Ukukhiqizwa ware sanitary wahlanganyela namakhulu izinkampani emhlabeni wonke. Phakathi kwabo, ukunakekela okukhethekile kufanele ikhokhwe inkampani Roca. Igobolondo oveza lokhu inkampani abadumile Spanish ihambisana ngokugcwele zonke izidingo ukuthi ngokuvamile kusebenza imikhiqizo yalolu hlobo.
Roca inkampani ngasese aphethwe yasungulwa ngo Barcelona ngo-1917. Ngaleso sikhathi, wayethandana wahlanganyela kuphela ekukhiqizeni yensimbi radiators. Ngokuhamba kwesikhathi, inkampani umndeni eziphethwe, zakubo esungulwe, Sakushintsha kwenkululeko imisebenzi yayo. Okokuqala, ifemu eyingoduso ekukhiqizeni izinto zokwakha, futhi kamuva kwi-ukukhiqizwa kwezimpahla kanye nemishini zangasese.
Lokhu isiqondiso ulilethele udumo lwakhe ngamazwe wembatha belingana abaholi ezifana MonteBianco, Ledeme, Gustavsberg nabanye. Kuze kube manje, umkhiqizo oyinhloko inkampani Roca - ukucwila. Kusukela ngaleso sikhathi, ngemizamo onjiniyela nabaqambi inkampani uye wakwazi ukuba ujike lo mkhiqizo ibe umsebenzi wangempela yobuciko. Manje ubani ongathi Roca - usinki, okuyinto angakwazi ukwanelisa izifiso amakhasimende olindele kunazo. Ngaphezu ukusebenza ezehlukile, it libhekene obugagu kanye ukuklama ukubukeka ekhangayo. Lapho ebuka umkhiqizo abaningi banesifiso ukufaka esikhundleni imishini endala yakho yokugezela. Ngemva Roca - igobolondo, olubheka nenhle hhayi kuphela. Lwenza wayefisa induduzo endlini futhi lula ukusetshenziswa nsuku zonke.
Akukhona nje izakhamuzi emafulethini nasemakhaya abo, kodwa futhi abanikazi amabhizinisi zezimboni kanye nezikhungo zomphakathi bakholelwa ukuthi esikhathini yokugezela noma yangasese Igumbi kufanele kube nje ukucwila Roca. Izibuyekezo imikhiqizo wale nkampani omuhle kuphela.
Okokuqala abasebenzisi Yiqiniso, unake izinga lomkhiqizo, futhi ukuba ikakhulu sincike ezazisetshenziselwa ukwenza ukukhiqizwa yayo. Ukukhiqiza yabo amagobolondo ngokuqinile Roca Ngaphezu nezobumba, stoneware iphosilini ngokuvamile isebenzisa asebenza ngebhethri (edwaleni), kanye duralumin (izinhlobonhlobo ngcono cast zemabula). Lokhu kuvumela hhayi kuphela ukudala ezintsha nemibala onobuhle, kodwa futhi kunikeza ithuba umkhiqizo wona yinhle ngaphezulu kusukela iphuzu yobuhle umbono. Lavuselelwa okukhulu njengoba premium izinto, ukuklanywa okuyinto kulekelelwa ingilazi nensimbi izakhi. Ikamelo lapho efakiwe zika, kubukeka stylish ngaphezulu futhi sibukeka kahle. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe ukuthi cishe zonke inkampani Roca imikhiqizo sithethelele isiqinisekiso iminyaka eyishumi esikhishwe kubo ngumkhiqizi.
Le nkampani inyathelisa amaqoqo eziningana ware enelanga, asebenzisa echibini for yokugezela Roca. Ethandwa kakhulu zazo yilezi: Dama Senso, Victoria, i-Gap, Dama Senso Compacto, Nexo, Giralda, Hall, Khroma, Meridian-N, Pappenning, Meridian-N Compacto, Dama-N, Melika nabanye. Bonke babe izimfanelo ezintathu eziyinhloko ehlukile ukuthi kukhona esivela kuzo zonke imikhiqizo Roca:
design stylish, ezingase zibangelwe ukunambitheka akunakuqhathaniswa.
Lokhu kusikisela ukuthi imikhiqizo lenkampani Spanish omunye the best hhayi kuphela e-Europe kodwa futhi emhlabeni wonke. Okwamanje, le nkampani ikhiqiza izinhlobo ezilandelayo amagobolondo:
Eyakhelwe phezulu noma ezansi.
Lezi ongakhetha ethulwa onobuhle etholakala ezahlukene intengo izingxenye, ngokuvumela ikhasimende ngalinye ukukhetha umkhiqizo ilungelo ukuze ivumelane zonke izici zawo ezithakazelisayo.
Okwamanje, nokucwila egumbini lokugezela Roca yokugezela angathengwa at Izitolo ahlukahlukene. Ezinye zazo yilezi wabenza inkampani owaziwa, okuyinto kakhulu kuthinta intengo umkhiqizo osuphelile. Ukusebenza kuma okusekelwe ezivumelwaneni, nabathengisi ukuthengisa izimpahla zabo ukuze bakhonze izithakazelo umkhiqizi yena. amanani imikhiqizo ahlinzekwa kuyinto ephansi kakhulu kunalokho ezitolo ezifana uhla - kuyinto ebanzi lukhulu. Ngakho, Roca brand itholakala Izitolo okudayisa eshona njengoba low 1190 kuya 33530 ruble. Izindleko ngomkhiqizo ngamunye kuncike ezazisetshenziselwa ukwenza womshini yayo nasemhlanganweni. Ngokwesibonelo, ngaphezu onobuhle abaningi ezinezikhoxe noma countertops. Batinikela umkhiqizo ukubukeka isiqediwe futhi zikuvumela ukuba uthatha njengelungelo ahlukene design isici.
Kusukela ngo-2004, inkampani Spanish ezisebenza eRussia, lapho-ke Umele izindaba "Rock Rus". Ngenxa yalokho, ezweni lethu sakha izimboni eziningana ngokuhlanganyela ukuthi ukukhiqiza imikhiqizo yayo ngaphansi ebhekiwe ongoti ehola ale Nhlangano Roca Group. Lokhu kungabi sengxenyeni noma yikuphi ukuphazamiseka empahleni ezitolo futhi ivumela abaseRussia nganoma yisiphi isikhathi ukuze bathenge imikhiqizo ye inkampani nge idumela emhlabeni wonke.
Bidet. Lokho kuyinto: sokunethezeka noma isidingo?
Kufuneka izimo saxifrage kudingekile? Ukutshala nokunakekela saxifrage